Abasebenzi insiza kwezentengiselwano yinoma esikalini, ukukhathazeka mayelana nokuphepha kwezimpahla ezitolo kanye nezitolo ezinkulu, ozama awuvikele amasela ngokufaka e salesrooms yayo ekhethekile anti-theft nezitolo - amadivaysi ekhethekile ukuphepha.
Okwamanje, kunezinhlobo ezine zama-anti-theft izinhlelo, ogama operation isekelwe radiomagnetic, RF, akustikomagnitnoy nobuchwepheshe kagesi.
Nokho Ngayinye yalezi ongakhetha sinezici yayo, ububanzi, emihle nemibi, ngaphambi ukuba makudle kohlobo oluthile, ukuba bacabangele zonke izici. Phakathi kwezici ukuthonya choice of imishini, ukuhambisana nakomaka nezinzwa nge isihloko khona kanye nezinga ukuphazamiseka, ezithinta izinga kudivayisi, ematfuba ukusetshenziswa izinhlobo esebenza futhi tags (ukuthengwa izakhi ezintsha alahlwayo kumfundi izobiza "eshisiwe"). Abanikazi Izitolo okudayisa futhi linengqondo ukuba banake ububanzi mavesi, lapho kuhlelwe ukufaka anti-theft iminyango kanye ozimele - kungenzeka ukuthi ngeke avumele amakhasimende ngaphandle kobunzima ukuhambahamba esitolo noma ungaphandle kwalo.
izinhlelo kuvuse amazinga eziningana ezahlukene, isibonelo, ngezinga eliphakeme ngokuthembeka - uhlelo akustikomagnitnoy - mayelana 95 amaphesenti, isimiso RF futhi enokwethenjelwa kakhulu - amaphesenti angu-90. Kunoma ikuphi, ngaphambi kokuba wenze ukukhetha futhi ukuthenga imishini anti-theft ngoba izitolo, kudingeka utadishe ngokucophelela Ukusabela rate ohlelweni e lima kwezimpahla ne ithegi.
amasango EAS kungenziwa agibele amahhashi at the ophumayo sikhungo okudayisa noma ngesikhathi checkout endimeni. Indawo yedivayisi sokufunda emnyango esitolo kubiza abanikazi nezitolo ezinkulu ushibhile, kodwa lesi simiso ingasaphathwa elula kuka uma ufaka esangweni eduze yemali, ngoba idinga kusukela cashier Ukuhlolisisa izimpahla kanye nokususwa kwawo wonke tags kanye umake amalebula, ngaphambili eqondiswa elinikeziwe kuncike.
Ukuzama ukuthola "umhlabathi ophakathi" phakathi izindleko kanye nesikhathi izindleko, nomkhiqizi ngamunye unquma ukuthi ukufaka anti-theft izinhlelo bebodwa. Abanikazi nezitolo ezinkulu ezinkulu, ukwenza inzuzo enkulu, ukusungula izinhlelo zokuqapha at the Checkout, ekunciphiseni emigqeni futhi ukwandisa inzuzo, abanikazi Izitolo ezincane okudayisa uncamela wonge imali ukufaka imishini ezibizayo futhi ukubeka "Uhlaka" nomkhiqizo. Kulokhu, it igcina unogada, ukusivala abathengi izakhi zokuzivikela ku izimpahla phezu ekwetfuleni isheke ukukhokha.
By the way, ukuvikelwa ayo, ngisho oluthembekayo kakhulu, kungase kuvimbele amasela kanjalo ukulondoloza umkhiqizo.
Ngokuphathelene izakhi abaqashelwa anti-theft iminyango, zingaba amathuluzi ngesimo ukhiye Fob, ithegi, ilebula imakwe, Safer nokunye, futhi uma umkhiqizo ewusizo ngokukhethekile - zisebenzisa ezelekene sokuvikeleka.
Zokubhukuda Russian kazwelonke bezizwe kanye nezici zabo